Afaka adidy aho
Io ary ny anareo aloha ry Jean fa dia afaka adidy aho aa ! MP raha mahatsapa tena ianao?
Efa ireo notantarainay ireo daholo ny mombamomba azy rehetra ee! Asakasakao raha mbola hatoky azy ihany amin’ity indray mitoraka ity. Izy irery anie izao ry Jean tamin’ireo nitantana teto an-tanàna teto no niovaova ekipa isak’izay mahazo fahefana izao ee! tonga dia omeny ny tsipaka am-bavafo fotsiny izao ianao rehefa azony izay ilainy ee! Ianao io izay impiry nifidy azy kanefa dia jereo anie ity ianao ee! Ny havanao koa ireo efa nampanantenainy an’ity rehetra ity tamin’izany fotoana kanefa dia aiza? Navadiny tanteraka mihitsy izao ny resaka fa tsy misy an’izany resaka tranobe mijoalajoala izany intsony na koa hoe fanondrotan-karama. Afaka adidy aho hoy aho.